Maldiva: Teknika Fampijaliana Any am-Paradisa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 17:59 GMT
Marihan'ny bilaogy Groundsix ny sasantsasany amin'ireo teknika fampijaliana nampiasaina tamin'ireo voasambotra sy voafonja tao Maldiva.
Toerana lehibe fitodiana sy fanaovana fialantsasatra no ahafantaran'izao tontolo izao an'i Maldiva. Asehon'ny antontanisan'ny fizahantany tamin'ny Janoary 2017 ny isa faratampony tamin'ny fitsidihan'ireo mpizahatany. Ny fikambanana iray manana foibe any Royaume-Uni, Friends of Maldives (FOM) – Naman'i Maldiva – no nisantatra ny Fanaovana Ankivy ireo Toerana Fialantsasatra Voafantina ao Maldiva mba hanakiviana ireo mpizahatany tsy handany ny fotoana fialantsasatr'izy ireo any amin'ireo toerana fialantsasatra izay manana fifandrohizana amin'ny mpitondra amperinasa. Ambaran'ny FOM fa ilay ankivy dia tsy natao hanakanana ny olona tsy hitsidika an'i Maldiva.